दाँतबारे ६ भ्रम ६ यथार्थ – Medianp
दाँतबारे ६ भ्रम ६ यथार्थ
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, असार २८, २०७५०९:५०0
प्रायः मानिसमा सेतो दाँत र सुन्दर मुस्कानको चाहना हुन्छ । त्यसैले दाँतमा कुनै समस्या आइहालेमा दाँतको सुन्दरतालाई कायम राख्नका लागि मानिसहरू भरमग्दुर प्रयास गर्छन् । कतिपयले दाँतबारे नियमित रूपमा चिन्ता लिने पनि गर्छन् । दाँतलाई सुन्दर देखाउन कतिले टुथपेस्ट परिवर्तन गर्छन् भने आयुर्वेदिक उपचारलगायत अन्य विकल्प अपनाउँछन् । तर, दाँतको विषय र यसको सरसफाइबारे कैयौँले गलत वा भ्रममा विभिन्न गतिविधि गरिरहेका हुन्छन् । यी हुन् दाँतबारे केही भ्रम र त्यसको यथार्थ :
१. दाँत सेतो बनाउने टुथपेस्टका कारण दाँतको रङ निकै सुध्रिने गर्छ ।
यथार्थ : हामीमध्ये धेरैलाई लाग्न सक्छ कि टुटपेस्टले पहेलो दाँतको रङ परिवर्तन गरेर सेतो पारिदिन्छ । जुन गलत हो । यस्ता उत्पादनमा केही सेता रसायन हुन्छन् । तर, यसले पूरै दाँतलाई सुरक्षित गर्छ वा सेतो बनाउँछ भन्नेचाहिँ होइन ।
२. दाँत सफा गर्दा इनामेल टिस्युमा नकरात्मक प्रभाव पर्छ ।
यथार्थ : धेरैले इनामेल टिस्युमा असर पार्ने भन्दै दाँत सफा गर्नको लागि डराउँछन् । जुन सत्य होइन । दाँत सफा गर्नु त एउटा प्रमाणित दन्तचिकित्सा प्रक्रिया हो । जुन डेन्टिस्ट वा अनुभवी चिकित्सकबाट गर्न सकिन्छ । त्यसैले, दाँत सफा गर्नका लागि प्राकृतिक घरेलु उपचार या सौन्दर्य सैलुन जानुभन्दा दन्त चिकित्सक रेखदेखमा निगरानीमा रहनु निकै गुण बढी उत्तम हुन्छ ।
३. फलफूलले दाँतमा चमक ल्याउने काम गर्छ ।
यथार्थ : हामीले प्रायः सुन्ने कुरा गरेको कुरा, के भने केरा या कागतीजस्ता फलका बोक्राले दाँतमा रगड्दा दाँत चमकदार बनेर जान्छ । हो, फल केही मात्रामा फाइदाजनक हुन्छ । तर, त्यसलाई दाँतमा रगड्दा भने झन् ठूलो बेफाइदा हुन्छ । यसरी रगड्दा दाँतमा एसिड उत्पन्न हुन्छ र दाँतको इनामेलमा क्षति पुग्न जान्छ ।
४. एकपटक दाँत सफा गर्दा स्थायी रूपमा सबै समस्या निको भएर जान्छ ।
यथार्थ : एउटा सत्य के हो भने अनुभवी दन्तचिकित्सकबाट उपचार गर्दा केही समयसम्म दाँत सेतो रहन्छ । त्यसो भन्दैमा यो होइन कि जीवनभर दाँत सेतो बन्छ या सुरक्षित रहन्छ । हाम्रो खानाको स्वभाभ र जीवनशैलीअनुसार दाँतलाई नियमित रूपमा सेतो पार्न वा सफा गर्न आवश्यक हुन्छ ।
५. दाँतबाट रगत बगिरहेको छ भने तत्काल ब्रस गर्न रोक्नुपर्छ ।
यथार्थ : बरु ब्रस गर्ने समय गिजाबाट रगत बग्न थालेमा तत्कालै चिकित्सककहाँ जाँच गराउन जरुरी हुन्छ । गिजाबाट रगत त्यतिवेला मात्र बग्छ, जतिवेला दाँत राम्रोसँग सफा गरिँदैन । के बुझ्न जरुरी हुन्छ भने नियमित ब्रसिङले दाँतको समस्या समाधान हुने गर्छ ।
६. दाँतको दुखाइ कम गर्नका लागि एस्पिरिनको आवश्यकता पर्छ ।
यथार्थ : यो भनाइ केही हदसम्म सत्य हो । पक्कै पनि एस्पिरिनबाट दुखाइलाई राहत मिल्ने गर्छ । तर, एस्पिरिनले पनि गिजा र दाँतलाई क्षति पु-याइरहेको हुन्छ । नया पत्रिकाबाट